Dowlada Somalia oo War ka soo saartay duqeyntii ka dhacday Jilib (Akhriso)
Thursday July 30, 2020 - 01:27:05 in Wararka by Editor Caynaba News
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa taliska ciidanka AFRICOM ayaa duqeyn cirka ah ka gaystay meel u dhaw degmada jilib
ee gobolka Jubbada dhexe, ee Soomaaliya.
Duqeyntan ayaa lagu dilay hal (1) ka tiran xagjirka Alshabaab iyada oo lagu dhaawacay mid kale. Sidoo kale waxaa duqeyntan lagu burburiyey xero ciidan oo ay Alshabaab ku lahaayeen goobtaa.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Mareykanka waa ay ka go’antahay la dagaalanka Daacishta Soomaaliya iyo argagaxisada Alshabaab, si loo baajiyo dhimashada dadka rayidka ah ee leh rag, haween, carruur ee ku dhaqan dalka Soomaaliya iyo dowladaha deriska la ah Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AFRICOM ee Mareykanka ayaa taxadar dheeri ah ku bixinaya ilaalinta waxyeelo soo gaarta shacabka aan waxba galabsan, islamarkaana diyaar u ah in ay si buuxda u baaraan haddii waxyeelo shacab la soo wariyo.
Iyada oo la soo warinayo waxyeelo shacab ayaa ilaa imanka xageena hubintii la sameeyey aysan jirin wax shacab ah oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhawaac soo gaadhay midna.
Dadaalada aan ku bixino ka taxadaridda waxyeello soo gaadho shacabka ayaa aad uga duwan weerarrada iyo gaboodfallada ay Daacishta Soomaaliya iyo Alshabaab ku qaadaan meelaha ay dadweynaha ku badanyihiin ee Soomaaliya.
Weerarkan ayaa lagu garab-istaagayey Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada, si looga takhaluso falalka gurracan ee ay Daacishta Soomaaliya iyo Alshabaab ka gaystaan Soomaalia iyo waliba in loo helo dadka Soomaaliyeed mustaqbal ifaya.”